“အနုပညာသမားစစ်စစ်ကို ငွေနဲ့ခိုင်းလို့မရဘူး စိတ်မပါရင် ဘာမှမလုပ်ဘူး”လို့ ဆိုလာတဲ့ လူရွှင်တော် ကိုကောင်းကျော် | BurmeseAsia
Home News “အနုပညာသမားစစ်စစ်ကို ငွေနဲ့ခိုင်းလို့မရဘူး စိတ်မပါရင် ဘာမှမလုပ်ဘူး”လို့ ဆိုလာတဲ့ လူရွှင်တော် ကိုကောင်းကျော်
“အနုပညာသမားစစ်စစ်ကို ငွေနဲ့ခိုင်းလို့မရဘူး စိတ်မပါရင် ဘာမှမလုပ်ဘူး”လို့ ဆိုလာတဲ့ လူရွှင်တော် ကိုကောင်းကျော်
ကောင်းကျော်ကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင်၊ ဟာသ လူရှင်တော် ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တွေ ထဲက ဝါရင့်အနုပညာရှင် တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတ ယ်။ စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံတော် အာဏာ ကိုလုယူတဲ့ နေ့ကနေ စပြီး အမှန်တရားဘက်ကနေ ဒီမိုကရေစီ အတွက်
ပြည်သူတွေ ၊ ပရိသတ်တွေ နဲ့ အတူ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အမှန်တရား ဘက်ကနေ ရပ်တည်ခဲ့ တာကြောင့် ပရိသ တ်တွေရဲ့ အချစ်တွေ တိုးနေတာကို ခံနေရတဲ့ သူတစ်ဦးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ ပြည်သူတွေဟာ ဒုက္ခ အမျိုးမျိုးနဲ့ စိတ်သောက ရောက်နေရပြီး အားလုံးဟာ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ တတ် နိုင်သလောက် ကူညီမှုတွေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာလည်း ကောင်းကျော်ဟာ လူရွှင် တော် အသင်း(ရန်ကုန်)၏နာယက ဟာသလူရွှင်တော်ကြီး ဦးစိန်ရိုးကွယ်လွန်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကောင်းကျော်ဟာ အနုပညာသမား အစစ်နဲ့ အနုပညာ အလုပ်လုပ်စား သူတွေရဲ့ ကွဲပြားခြားနား ချက်ကို သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”အနုပညာကို တကယ်ချစ်တဲ့ အနုပညာသမား အစစ် ဆိုတာ ??? အနုပညာသမားအစစ်ဆိုတာ ငွေမရပေမဲ့ စိတ်ပါရင် ကိုယ့်စားရိတ် ကိုစားပြီး အလကား ဖျော်ဖြေပေးတတ် ကြသလို အနုပညာသမားအစစ်ဆိုတာစိတ်မပါရင်လဲ ငွေတွေ ဘယ်လောက်ပုံပေးပေး လုပ်ချင်မှလုပ်တတ်ကြတယ်။
အနုပညာလုပ်စားသူများကျတော့ အခွင့်ရေးတစ်ခုအတွက် လုပ်ချင်လာရင်လဲ ကိုယ်တွေက အနုပညာသမားမို့ ဘယ်သူနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေ အောင် လုပ်ရမှာဘဲလေ လို့ ဆင်ခြေ ပေါင်း တစ်သိန်း ပေးတတ်ကြလေ တော့ သတည်း။(အဖေ့ဆုံး မစကားလေးသတိရ မိလို့ပါ) ……” ဆိုပြီး
အဖေဖြ စ်သူက ဆုံးမသွ န်သင်ပေးခဲ့တဲ့ အ ကြောင်းလေးတွေ ဖော်ပြလာတာကို ပရိသ တ် တွေ အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်……..။
ကောငျးကြျောကတော့ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယို သရုပျဆောငျ၊ ဟာသ လူရှငျတျော ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတှေ ထဲက ဝါရငျ့အနုပညာရှငျ တဈဦးပဲ ဖွဈပါတ ယျ။ စဈကောငျစီက နိုငျငံတျော အာဏာ ကိုလုယူတဲ့ နကေ့နေ စပွီး အမှနျတရားဘကျကနေ ဒီမိုကရစေီ အတှကျ
ပွညျသူတှေ ၊ ပရိသတျတှေ နဲ့ အတူ တိုကျပှဲဝငျခဲ့တဲ့ အနုပညာတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို အမှနျတရား ဘကျကနေ ရပျတညျခဲ့ တာကွောငျ့ ပရိသ တျတှရေဲ့ အခဈြတှေ တိုးနတောကို ခံနရေတဲ့ သူတဈဦးဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။
လကျရှိအခွအေနမှောတော့ ပွညျသူတှဟော ဒုက်ခ အမြိုးမြိုးနဲ့ စိတျသောက ရောကျနရေပွီး အားလုံးဟာ တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနေ တတျ နိုငျသလောကျ ကူညီမှုတှပေေးနတောပဲဖွဈပါတယျ။လတျတလောမှာလညျး ကောငျးကြျောဟာ လူရှငျ တျော အသငျး(ရနျကုနျ)၏နာယက ဟာသလူရှငျတျောကွီး ဦးစိနျရိုးကှယျလှနျတာနဲ့ ပတျသတျပွီး ဝမျးနညျးကွကှေဲနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီတဈခါမှာတော့ ကောငျးကြျောဟာ အနုပညာသမား အစဈနဲ့ အနုပညာ အလုပျလုပျစား သူတှရေဲ့ ကှဲပွားခွားနား ခကျြကို သူရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ ဖျောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။”အနုပညာကို တကယျခဈြတဲ့ အနုပညာသမား အစဈ ဆိုတာ ??? အနုပညာသမားအစဈဆိုတာ ငှမေရပမေဲ့ စိတျပါရငျ ကိုယျ့စားရိတျ ကိုစားပွီး အလကား ဖြျောဖွပေေးတတျ ကွသလို အနုပညာသမားအစဈဆိုတာစိတျမပါရငျလဲ ငှတှေေ ဘယျလောကျပုံပေးပေး လုပျခငျြမှလုပျတတျကွတယျ။
အနုပညာလုပျစားသူမြားကတြော့ အခှငျ့ရေးတဈခုအတှကျ လုပျခငျြလာရငျလဲ ကိုယျတှကေ အနုပညာသမားမို့ ဘယျသူနဲ့ ဖွဈဖွဈ အဆငျပွေ အောငျ လုပျရမှာဘဲလေ လို့ ဆငျခွေ ပေါငျး တဈသိနျး ပေးတတျကွလေ တော့ သတညျး။(အဖဆေုံ့း မစကားလေးသတိရ မိလို့ပါ) ……” ဆိုပွီး
အဖဖွေ ဈသူက ဆုံးမသှ နျသငျပေးခဲ့တဲ့ အ ကွောငျးလေးတှေ ဖျောပွလာတာကို ပရိသ တျ တှေ အတှကျပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော……..။
Previous articleနေပူကြီးထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းထီရောင်းနေတဲ့ အဖိုးဆီကနေ ထီတွေဝယ်ယူအားပေးပြီးကူညီခဲ့တဲ့ ဘေဘီမောင်
Next articleနိူင်ငံရေး မလုပ်တာဟာ ၅၀၅-က ကိုကြောက်လို့ဖြစ်ပြီး ဒူးရင်သီး ရောင်းတဲ့အကြောင်း ကိုရှင်းပြလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ခင်ပွန်း